बिचित्र संसार Archives - Online Tamang
तपाईं कसैको प्रेमी हुनुहुन्छ र प्रेमिकालाई जानकारी हुनेगरी कुनै अर्की युवतीको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत हुनुहोस्, परी–युवतीको प्रशंसा तपाईंका लागि घातक हुन सक्छ । हालै कजाकस्तानमा घटेको एक घटनाले यसरी नै सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । झाँना नूरज्हानोवा नामकी ३६ वर्षीया महिलाले आफ्ना प्रेमीको लिङ्गनै चक्कुले छिनालिदिएर थप शारीरिक यातना दिएकी छिन् । प्रेमीको गल्ती यति मात्र थियो कि झाँनाकी बहिनीको सामु उनले कुनै दोस्री महिलाको तारिफ गरेका थिए । बहिनीबाट उक्त जानकारी पाउनेबित्तिकै ती महिला डाहले आगो भइन् र प्रेमीलाई ‘पाठ’ सिकाउने मनस्थितिमा पुगिन् । युके मिररमा प्रकाशित समाचारअनुसार महिलाले प्रेमीलाई सजाय दिने खतर्नाक योजना बुनिन् र ‘सेक्स गेम’मा सहभागी हुन आमन्त्रित गरिन् । आफ्नो कोठामा बोलाएर उनले गेमको बहाना बनाई प्रेमीको हातखुट्टा स्कार्फले बाँध्नुका साथै मानिसको शरीर कमजोर तुल्या
कुनै गोरो बर्णकी महिलाको अनुहारमा कालो कोठी छ भने त्यसले सुन्दरतामा निखार ल्याइदिन्छ । कालो कोठी अनुहारमा भएमा कसैको नजर नलाग्ने विश्वास समेत रहिआएको छ । शरीरमा यस्ता कोठी हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । तर कोठीको अर्थ भने आ-आफ्नै तरिकाले लगाउने गरिन्छ ।यहाँ हामीले समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार शरीरको कुन अंगमा भएको कोठीको अर्थ के हुन्छ भनेर चर्चा गरेका छन् । १ जसको आँखाको सिधा तल कोठी हुन्छ उनीहरु कामूक हुन्छन् । यस्ता ब्यक्ति प्रेममा भावुक बन्छन् । यिनीहरु सहयोगी पनि हुन्छन् । २ औंलामा कोठी भएको ब्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहारकुशल र न्यायप्रिय हुन्छन् । ३ चोर औंलामा कोठी हुने ब्यक्तिक विद्वान गुणबान र धनवान हुन्छन् । तर यिनीहरुका शत्रु भने धेरै हुन्छन् । ४ दायाँ आँखाको कुनामा कोठी भएमा यस्ता ब्यक्ति भावुक हुन्छन् । यस्ता ब्यक्ति अलि डाहाढे स्वभावका हुन्छन् । ५ माझी औंलामा क
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ठानिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा १२ अनुसार सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीले गोरेलाई पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत आज सार्वजनिक गरेको हो । साढे ३३ किलो सुनका मुख्य अभियुक्त गोरे फरार भएपछि नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको अनुसन्धानबाट उनी काठमाडौँ आएको सूचनाका आधारमा आज बिहान ५ः३४ मा काठमाडौँ महानगरपालिका– ८ गौरीघाटबाट पक्राउ गरिएको संयोजक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि भारतबाट पक्राउ गरिएको भनिए पनि अनुसन्धान टोलीले गौरीघाटबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ । यस प्रकरणमा विसं २०७५ वैशाख १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा ६५ जनाको नाममा मुद्दा दर्ता गरिएकामा ३२ जनालाई अदालतमा उपस्थित
श्रीमान र श्रीमतीले संगै जीउने संगै मर्ने कसम खाएका हुन्छन् । जीवनभर संगसंगै भएका श्रीमान र श्रीमतीको एकै पटकमा मृत्यु भएको घटना विरलै सुन्न पाइन्छ । धर्म र असल कर्म गर्नेहरुलाई यस्तो संयोग जुर्छ भन्ने भनाई पनि समाजमा व्याप्त छ । पर्वतको बाजुङ्गमा भने यस्तै संयोग जुरेको थियो। श्रीमानको मृत्यु भएको दुई घण्टापछि श्रीमतीको पनि मृत्यु भएको हो। पर्वतको बाजुङ्ग गाउँ विकास समिति वडा नं ९ का ९१ बर्षीय बृद्ध रुद्रबहादुर बिक र उहाँकी ८१ बर्षीय श्रीमती छलिदेवी बिकको दुई घण्टाको फरकमा कालगतीले नै मृत्यु भएको हो । स्थानीयबासी ले भने अनुसार श्रीमान रुद्रबहादुरको गत बिहान १०.३० बजेको समयमा मृत्यु भएको हो भने श्रीमती छलिदेवीको मृत्यु मध्यान्ह १२.३० मा भएको हो । दुई घण्टाको फरकमा श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भएपछि आर्का दिन मोदीबेणीघाटमा एउटै चित्तामा दुई जनाको दाहसंस्कार गरिएको हो। दुई घण्टाको फरकमा
साउदी अरबमा एक महिलाले आफ्ना पतिलाई घरमा काम गर्ने महिलासँग यौनसम्पर्क राख्ने गरेको शंका लागेपछि गोप्य क्यामराले सो तथ्य पत्ता लगाएकी छिन् । क्यामराको पिक्चरअनुसार पतिले घरमा काम गर्ने महिलासँग भान्सा कोठामा यौनसम्पर्क गर्ने गरेका छन् । समाचारमा जनाइएअनुसार आफ्ना श्रीमानको कार्यबाट हैरानी भएकी ती महिलाले आफ्नो घरभित्रका केही स्थानमा गोप्य क्यामरा फिट गरेकी थिइन् । साउदी अरबको कानुनअनुसार श्रीमानको गल्ती पकड्नका लागि राखिएको गोप्य क्यामराको विषयले ती महिला नै फस्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार ती महिलालाई जेलसम्म हुन सक्छ । आफ्ना श्रीमानलाई घरमा काम गर्ने महिलासँग यौनसम्पर्क गर्न लागेको भिडियो गोप्य क्यामरामार्फत खिँचेपछि ती महिलाले सामाजिक सञ्जालबाट तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरिदिएको डेली मेलले जनाएको छ ।साउदी अरबमा एक महिलाले आफ्ना पतिलाई घरमा काम गर्ने महिलासँग यौनसम्पर्क राख्ने गरेक
एजेन्सी । युक्रेनमा एउटा डरलाग्दो सडक दुर्घटनामा एउटा गाडी दुई वटा कारसँग ठोकिंदा भकुण्डो जस्तै गरी ठक्कर खाने गाडी हावामा फन्को खाँदै भुईमा झर्न पुग्छ। तर, त्यति ठूलो दर्घटनाबाट पनि भाग्यमानी ड्राइभर अच्चमले बच्छन्। उक्त दुर्घटना सडकमा भएको सीसीटीभी क्यामरामा कैद भएको छ । जुन हेर्दा नै आङ सिरिङ्ग हुन्छ। यो घटना युक्रेनको कोलोमिया भन्ने ठाउँमा घटेको हो। सडकमा लगाईएको सीसीटीभीको फूटेजमा कैद भएको भिडियोमा एउटा चौबाटोमा एउटा कार निकै तिब्र गतिमा आउँछ र अर्को तर्फबाट आएको एउटा गाडीलाई ठक्कर दिन्छ। ठाक्कर दिने गाडी बत्ताउँदै केहि पर गएर रोकिन्छ। तर, ठक्कर खाएको गाडी भने चौबाटोमा क्रस गर्न रोकी राखेको अर्को गाडीमा ठोक्किएर एक छिन हावामा उड्छ र यत्तिकैमा उक्त गाडीको झ्यालको सिसा फुट्छ अनि ड्राइभर त्यहाँबाट फुत्त झर्छन् र भाग्न सफल हुन्छन्।एजेन्सी । युक्रेनमा एउटा डरलाग्दो सडक दुर्घटनामा एउटा
नेपाली युवतीलाई यौनांगमा ढुंगा, फलामका टुक्रा हालेर बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड
गत फेब्रुअरी दोस्रो सातामा हरियाणाको रोहतकमा एक नेपाली युवतीमाथि जघन्य बलात्कारसहित हत्या गर्ने ७ जना अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । मानसिक रोगको उपचारका लागि बर्दिया राजापुरबाट आएकी २८ वर्षीया सुनार युवतीलाई स्थानीय भारतीय नागरिक र नेपाली कामदारले नजिकैको जंगलमा लगेर बलात्कार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । बलात्कारपछि उनको यौनांगमा ढुंगा, फलामका टुक्रा हालेर यातनापूर्ण हत्या गरिएको समाचार आएपछि प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । हरियाणा राज्यमा विशेष अदालतकी न्यायाधीश सीमा सिंघलले पदम, पवन, सुनील, सरबर, राजेश, सन्तोष र मानवीरलाई जनही १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकिएको छ । गत फेब्रुअरी दोस्रो सातामा हरियाणाको रोहतकमा एक नेपाली युवतीमाथि जघन्य बलात्कारसहित हत्या गर्ने ७ जना अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । मानसिक रोगको उपचारका लागि बर्
यी ७ देश जहाँ महिला सबैभन्दा असुरक्षित मानिन्छन – दिनदहाडै बलात्कारदेखि डरलाग्दा यातनासम्म दिइन्छ पुरा हेर्नुस
यी ७ देश जहाँ महिला सबैभन्दा असुरक्षित मानिन्छन - दिनदहाडै बलात्कारदेखि डरलाग्दा यातनासम्म दिइन्छ पुरा हेर्नुस आमाशयका भित्तामा भएको इन्फ्लायिसन (सुन्निएर रातो तातो भएर दुख्ने समस्या) भने आमाशयका भित्ताको श्लेष्म झिल्ली च्यातिएर घाउ भएको अवस्थालाई भने ग्यास्ट्रिक अल्सर भनिन्छ। ग्यास्ट्रिकको प्रारम्भिक अवस्था हो भने अल्सर त्यसैको विकराल रूप हो। ग्यास्ट्राइटिसलाई तीव्र तथा दीर्घ /जीर्ण गरेर दुई समूहमा बाँडिएको छ। तीव्र ग्यास्ट्राइटिस पेटका भित्ताहरूमा भएका कोषहरूका लागी हानी गर्ने पदार्थहरूको सेवनले गर्दा हुन्छ। यी पदार्थहरूमा, दुखाइ कम गर्ने औषधी (एस्पि्रन, बु्रफेन, निम्स, नेप्प्रोक्सिन) जस्ता औषधी, विषसेवन, मसला, खुर्सानी र नुन ज्यादा हालेको खानेकुरा, जाँड-रक्सी, कोकिनजस्ता मादकपदार्थ पर्दछ। आमाशयमा एच. पाइलोरिक लगायत अन्य ब्याक्ट्रेरिया, भाइरस, कृमि वा फंगसको संक्रमणले पनि हुने गर्छ
प्रेमी र देवरसँग अलगअलग यौनसम्बन्ध राखेकी रीताले देवरकै हत्या गरिन् बागलुङ
प्रेमी र देवरसँग अलगअलग यौनसम्बन्ध राखेकी रीताले देवरकै हत्या गरिन् बागलुङ बागलुङ नगरपालिका–१३ पैंयुपाटाका रीता नेपालीले आफ्नै देवर २५ वर्षीय विनोद हरिजनको हत्या गरेको खुलेको छ । ‘आत्महत्या’ भनेर ढाकछोप गर्न खोजे पनि नेपालीले सहयोगीमार्फत देवरको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । घटनाका दोषी २६ वर्षीया नेपाली र ३२ वर्षीय टेकबहादुर थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत शुक्रबार राति रीता र टेकबहादुर मिलेर विनोदको घाँटी थिची हत्या गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङले बताउनुभयो । यौन सम्बन्ध राख्दै आएका भाउजू र देवरबीचको झगडाले हत्याको रुप लिएको हो । “झगडा बढ्दै गएपछि रीताले टेकबहादुरलाई घरमै बोलाइ दुवै जना मिलेर विनोदको हत्या गरेको पाइएको छ,” खापुङले भन्नुभयो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । हत्यापछि ‘आत्महत्या
छोरीसँग बिहे गर्नेलाई १८ अर्ब दाइजो दिने बाबुको घोषणा, बिहे गर्ने भए पूरा पढ्नुहोला अहिले बिहेको लगन छ । यदि तपाइँ पनि बिहे गर्ने मन बनाइरहनुभएको छ भने यो समाचार एकपटक पढ्नुभयो भने थकथकी लाग्नसक्छ । साँच्ची यो खबर अनुसार यहाँ एकैचोटी दुलहीको पति मात्र होइन अर्बपति समेत हुने मौका छ ।वास्तवमा एकजना अर्बपतिले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने ज्वाइँलाई १८ अर्ब नगद दाइजो दिने घोषणा गरेका छन् । चिनिया अर्बपति व्यापारी सेसिल चाओ जे सुंगले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले आफ्नी समलिंगी छोरीलाई बिहे गरेर अन्माइदिन मोटो रकम दाइजोको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनकी छोरी गिगी लेस्बियन छिन् । उनी पछिल्लो ९ वर्षदेखि आफ्नो एक लेस्बियन साथीसँग बस्दै आएकी छिन् । उनलाई बिहे गर्ने कोहीपनि केटा तयार भएका छैनन् । त्यसैका कारणले अर्बपति पिताले छोरीको बिहे गरिदिन यस्तो मोटो रकमको जुक्ति निकालेका हुन् । दाइजोको लोभ देखाए
बाथरुमको उत्तेजक भिडियोले युवती तनाबमा हेर्ने सबै पानी पानी – भिडियो सहित (6)
भारतीय नायिका बोलिन नेपालको पक्षमा भन्छिन गोरखपुर सम्म नेपालकै भुमी हो (भिडियो सहित ) (2)
रोचक समाचार ! १०१ वर्षीया वृद्धाले जन्माइन् २७ वर्षे ठिटोको बच्चा, (2)
सर्लाहीमा बलात्कृत किशोरीको मेडिकल जाँचमा आयो विश्वासै नलाग्ने रिपोर्ट, प्रहरी नै जिल्ल (2)
दाईलाई विदेश पठाएर भाउजु संगै हरेक रात बिताउदा एक दिन यस्तो बेहाल अबस्थामा भेटे पछि हेर्नुहोस् बिजोग (2)